Fiangonan'ny Atsinanana - Wikipedia
Ny Fiangonan'ny Atsinanana izay atao hoe koa Fiangonan'i Asiria na Fiangonan'i Mesopotamia dia iray amin'ireo Fiangonana kristiana voalohany. Araka ny lovantsofina dia ny Apostoly Tomasy (na Tomà) no nanorina azy. Tamin'ny taona 424 no nanambaràny ny fahaleovan-tenany. Nivakivaky matetika io fiangonana io nandritra ny tantarany ka ankehitriny dia maro ny Fiangonana mpandova azy mivantana:
Ny Fiangonan'ny konsily roa
ny Fiangonana Apostolika Asiriana any Atsinanana
ny Fiangonana Tranainy any Atsinanana
Ny Fiangonana Katolika atsinanana
ny Fiangonana Katolika Kaldeana
Ireo Fiangonana atsinanana samihafa an'ny Kristianan'i Masindahy Tomasy ao Atsimon'i India, izay teraky ny asa lehibe nataon'ireo misioneran'ny Fiangonan'ny Atsinanana tany India, dia mpandova azy koa.
Ny Fiangonana Asiriana na Nestoriana Ortodoksa dia manana ny foibeny ao amin'ny faritr'i Hakkari (ao Torkia atsinanana) sady maro amin'ireo mpanaraka azy no novonoina nandritra ny fandripahana lehibe tamin'ny Ady Lehibe Voalohany (fandripahana fantatra amin'ny anarana hoe Sayfo na Seyfo); ny faharoa, dia ny Fiangonana Kaldeana, mifandray amin'ny Fiangonana Katolika hatramin'ny taonjato faha-16, dia ahitana mpino maro ao avaratr'i Iràka ka izy ireo no fiarahamonina kristiana madinika misy mpikambana maro indrindra ao amin'ilay faritra na dia efa nisy zanaka am-pielezana tao efa ho taonjato iray.
Sahala amin'ireo zanaka am-pielezana armeniana, ny fikambanana asiro-kaldeana ortodoksa miray amin'ny Fiangonana katolika, sy ny Fiangonana siriana ortodoksa (monofizita) any atsinanana kokoa, dia misy mpino maro izay miely eran-tany. Ny fikambanana kristiana asiro-siriaka miteny armeniana dia niharan'ny fandripahana talohan'ny Ady Lehibe Voalohany sy nandritra izany sahala amin'ny mpino armeniana. Miparitaka avy ao Atsinanana-Akaiky mankany Amerika Avaratra sy any Skandinavia sy Aostralia ary amin'ny sisa amin'i Eoropa Avaratra izy ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonan%27ny_Atsinanana&oldid=886054"
Dernière modification le 13 Oktobra 2018, à 15:49
Voaova farany tamin'ny 13 Oktobra 2018 amin'ny 15:49 ity pejy ity.